तपाईको एन्ड्रोइड स्मार्टफोनका लागि सबैभन्दा उत्सुक अनुप्रयोगहरू Androidsis
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू, ट्यूटोरियलहरू
हामीले तपाईंलाई धेरै चोटी नै पहिल्यै बताइसकेका छौं। गुगल प्ले स्टोरमा त्यहाँ सबै चीजको लागि अनुप्रयोगहरू छन्। हामी केहि विचार गर्न सक्दैनौं जुन हामी आजको लागि अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्दैनौं। यसबाहेक, यदि तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि तपाईंसँग एप्लिकेसनको लागि एक शानदार विचार छ र तपाईं प्ले स्टोरमा जानुहुन्छ भने, तपाईंले एक भन्दा बढि अनुप्रयोग पाउनुहुनेछ जुन तपाईंले सोचे जस्तो गरी सेवा गर्दछ।
त्यसका लागि कहिलेकाँही यो एक विशिष्ट अनुप्रयोग पाउन गाह्रो हुन्छ। यदि तपाइँ खोजी गर्न चाहानुहुन्छ, उदाहरणका लागि, फोटोग्राफीका लागि अनुप्रयोगहरू, तपाइँ पूरै दिन बिभिन्न अनुप्रयोगहरूलाई हेरी खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। ती सबैले तपाईंलाई सबैभन्दा उत्तम प्रदान गर्दछन्, तर हामीले उनीहरूलाई नपठाउँदासम्म हामी जान्दैनौं कि हामी तिनीहरूलाई रुचि दिन्छौं वा गर्दैनौं।
1 त्यहाँ वास्तवमै जिज्ञासु अनुप्रयोगहरू छन् जुन तपाईंलाई थाँहा थिएन
2 हाम्रो Play Store को सबैभन्दा उत्सुक अनुप्रयोगहरुको शीर्ष
2.1 मेरो फोन पत्ता लगाउनुहोस्
2.2 ऊँटमा तिम्रो प्रेमिका
2.3 खोज्नको लागि ताली
3 तपाईंले आज खोज्नु भएको अनुप्रयोग पाउनुभयो?
त्यहाँ वास्तवमै जिज्ञासु अनुप्रयोगहरू छन् जुन तपाईंलाई थाँहा थिएन
आज हामी तपाईंलाई एन्ड्रोइड्समा एप्लिकेसनहरूको चयन प्रस्तुत गर्दछौं जुन हामीलाई सबैभन्दा अधिक जिज्ञासु भेटियो। अनुप्रयोगहरू जुन तपाईंलाई डाउनलोड गर्नका लागि छन्। तिनिहरु मध्ये केहि तपाईले पाउनु भएको खास आवश्यकतालाई सुल्झाउन सक्षम हुनेछ। अन्य तपाइँको कुनै कामको हुन सक्दैन। तर Play Store ले तपाईंलाई तपाईंलाई तिनीहरू आवश्यक परेको बेला तिनीहरूलाई प्रस्ताव गर्ने ख्याल राख्छ।
जहिले जहिले हामी सila्कलन गर्छौं हामी तपाईंलाई यो बताउँछौं कि यी न त राम्रो हो न नराम्रो। तिनीहरू केवल तिनीहरू मात्र हुन् जुन हामीले धेरै अरू माझ चयन गरेका छौं, र हामी तपाईंलाई प्रत्येकको कारण बताउनेछौं। यो एप्लिकेसनहरूको हाम्रो चयन हो जुन तपाईंले कल्पना गर्नुभएन अवस्थित हुन सक्छ।
हाम्रो Play Store को सबैभन्दा उत्सुक अनुप्रयोगहरुको शीर्ष
मेरो फोन पत्ता लगाउनुहोस्
कहिलेकाँही जब अनुप्रयोग उपयोगी र जिज्ञासु हुनुको उपयोगी हुन्छ। ठिक छ यो केहि नयाँ छैन, तर यस अवस्थामा हो जो यो थाहा छैन को लागी धेरै सल्लाहकार। र यो एक यस्तो सुविधाहरू हुन् जुन हामीले हाम्रो स्मार्टफोनहरूमा एप्लिकेसन स्थापना गर्दा हामी सबैभन्दा बढी खोज्छौं। यो अनुप्रयोग अपरिहार्य समूहको हुन सक्छ। त्यो अनुप्रयोग यो हाम्रो फोन हराउन को लागी कम चोट पुग्ने जति संभव छ, किनकि यसले हामीलाई यसले फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
हराएको उपकरण फेला पार्ने कबूल गर्ने अनुप्रयोगहरूको विविधताहरू मध्ये यो सब भन्दा पूर्ण हो। जबकि त्यहाँ सशुल्क संस्करण र लाइट छ, ०.0,99 XNUMX युरोको लागि हामी सजिलो आराम गर्न सक्दछौं। एक भन्दा कम यूरोको लागि यो अनुप्रयोगले हाम्रो हराएको मोबाइल फेला पार्न विभिन्न तरिकाहरू प्रदान गर्दछ।
यदि तपाईंलाई थाहा छैन तपाईंको फोन कहाँ छ र तपाईंलाई शंका लाग्छ कि तपाईंले यो हराउनुभएको छ एसएमएस पठाउनुहोस्। मेरो फोन फेला पार्नुहोस् सन्देशले अर्कोसँग प्रतिक्रिया गर्दछ जसमा यसले उपकरणको स्थान सूचित गर्दछ। यो सन्देशमा तपाईले फोनको बाँकी ब्याट्री स्तर पनि जान्न सक्नुहुनेछ। पनि रिंगटोन अधिकतममा बढाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईंलाई शंका लाग्छ कि यो तपाईंको नजिक छ।
तपाईं ०२१01234 पाठको साथ अर्को फोनबाट सन्देशहरू पठाउन सक्नुहुनेछ र तपाईं तुरुन्तै थाहा पाउनुहुनेछ कि हराएको स्मार्टफोन कहाँ छ। 56789 XNUMX sending पठाएर हराएको मोबाइलले सुन्नको लागि गैर-स्टप बज्नेछ र यसलाई पत्ता लगाउन सक्षम हुनेछ। नयाँ संस्करण पनि सबै सामग्री रिमोटली मेट्ने क्षमता समावेश गर्दछ। गाह्रो मोबाइल बिना हराएको मोबाइल फेला पार्न सजिलो हुनेछ।
मेरो फोनले केहि प्रस्ताव गर्दछ कि केहि अनुप्रयोगले विज्ञापन गर्ने आँट गर्छ। र त्यो हो यदि तिनीहरूको भुक्तानी अनुप्रयोग प्रयोग गरे पछि तपाईं खुसी हुनुहुन्न भने तिनीहरूले तपाईंलाई डाउनलोड मूल्यको १००% फिर्ता गर्नेछन्। विकासकर्ताहरूले यस अनुप्रयोगमा यो विश्वासको स्पष्ट संकेत हो। तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? एक यूरो भन्दा कमको लागि यो एक ठूलो लगानी हो।
ऊँटमा तिम्रो प्रेमिका
हास्यको भावना र Machismo को पूर्ण अस्वीकृति र यो समावेश सबै को अगाडि जानुहोस्। यस अनुप्रयोगले केवल साथीहरूसँग हाँस्न मात्र प्रयोग गर्दछ। वा यदि तपाइँ यसलाई गर्न मनपराउँनुहुन्छ भने, यो पनी तपाइँको पार्टनरलाई निस्क्रिय पार्छ, जब तपाइँ उसलाई परिणाम देखाउनुहुन्छ।
त्यो अनुप्रयोग तपाइँको प्रेमिकाको उँट मान गणना गर्नुहोस्। हो मित्रहरू, जब तपाईंले सोच्नुभयो कि तपाईंले सबै कुरा देखइसक्नुभयो, हामी यो "जिज्ञासु" अनुप्रयोग प्रस्तुत गर्दछौं। हामीले जवाफ दिनु पर्ने प्रश्नहरूको श्रृंखलाको माध्यमबाट, अनुप्रयोगले एक आकलन गर्छ। उमेर, वजन, यदि उनी मेकअप प्रयोग गर्छिन्, यदि उनी पढ्न सक्छिन्, र अन्य मूर्खतापूर्ण प्रश्नहरू जान्दछन्, यी विकासकर्ताहरूले सिर्जना गरेको एल्गोरिथ्मले हामीलाई ऊँटहरूमा चित्रण गर्छ।
यो मजाक को रूप मा यथार्थपरक छयो यो अनुप्रयोग हो, जुन रमाईलो गर्न बाहेक अरू केहि प्रयोग गरीरहेको छैन। यद्यपि त्यहाँ कोही छन् जसले आफ्नो टाउकोमा हात राखेका छन्, अनुप्रयोगका रचनाकारहरू आफैंले आश्वासन दिन्छन् कि उनीहरू महिलालाई बढी सम्मान गर्दछन्। कै त यस अनुप्रयोगको एक मात्र उद्देश्य जीवनलाई हास्यको साथ लिनु हो। के यो हास्यास्पद वा अनुपयुक्त देखिन्छ?
खोज्नको लागि ताली
ताली पाउनको लागि एन अर्को अनुप्रयोग हाम्रो हराएको फोनहरू फेला पार्न, तर केहि फरक छ। यदि तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जसले आधा दिन फोन खोज्नुहुन्छ, यो अनुप्रयोगले तपाईंलाई धेरै मद्दत गर्न सक्दछ। यदि तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन हरेक दिन घर, कार वा काममा हराउनुहुन्छ भने, क्ल्याप टु फाइन्ड तपाईंको लागि डिजाईन गरिएको छ।
के तपाईंलाई ती "अस्सी" कुञ्जी रिingsहरू याद छ जुन हराएको कुञ्जीहरू फेला पार्न प्रयोग गरिएको थियो? कुञ्जीहरू घरको भित्र देखिन्छन् किनभने यसले तिनीहरूलाई पत्ता लगाउन बिप बगाउँदछ। ठिक छ, यो अनुप्रयोग त्यो विचारबाट प्रेरित छ, तर सिट्टी बजाउनुको सट्टा हामीले ताली बजाउनु पर्छ
तीन ताली छुनुहोस् यसलाई प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस् र यसलाई कन्फिगर गर्नुहोस्। तिमी सक्छौ छनौट गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन बज्न चाहनुहुन्छ, कम्पन वा फ्ल्यास प्रकाश। तपाई आवाज गर्न चाहानु भएको टोन र भोल्यूम पनि चयन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं समय र सचेत प्लेब्याक अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ, जब तपाईंले चाहनुभएको ताली पहिचान बन्द गर्न सक्षम हुनुहोस्।
यस अनुप्रयोगले तपाइँलाई तपाइँको स्मार्टफोन फेला पार्न हरेक दिनको समय खेर फालिन मद्दत गर्दछ। अधिक ब्याट्री उपभोग नगर्न वचनहरू खोज्न ताली। र तपाइँ एक एकल टचमा यसलाई सक्रिय वा निस्क्रिय गर्न गृह स्क्रिनमा एक विजेट समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। यस अनुप्रयोगका बारे तपाई के सोच्नुहुन्छ? केहि र केहि को लागी, यो धेरै उपयोगी हुन निश्चित छ।
यो अनुप्रयोग होaअनिर्णित लागि महान उपकरण। र तपाईं छिटो र अनियमित साना परिवार द्वन्द्वको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। एक अनुप्रयोग जुन एक क्षणमा र सबै प्रकारको कुनै प्रभाव प्रभाव बिना निर्णय गर्दछ। आज कोही पनि कुकुर हिंड्न जान चाहँदैनन्? अनियमित तुरून्त तपाईंलाई अनियमित जवाफ तुरुन्तै दिन्छ ताकि कुनै विवाद छैन।
साथै तपाईं समावेश अंकहरू थपेर एक ड्रा चलाउन सक्नुहुन्छ। आज कसलाई फोहोरमा जान पर्ने निर्णय गर्न धेरै उपयोगी छ। एक देखि चार मा एक नम्बर छनौट गर्नुहोस् र रान्डमाइज हामीलाई पूर्ण र्यान्डम नम्बर दिनेछ। यदि तपाईंको नम्बर आएको छ भने, यो नराम्रो वा राम्रो भाग्य को कुरा हो।
एउटा अनुप्रयोग वर्गीकृत गर्न गाह्रो तर त्यो प्रयोग गर्नेहरूलाई मंत्रमुग्ध गर्दछ। यदि तपाईं जहिले पनि अफिसमा कफी तयार गर्नुहुन्छ, यो अनुप्रयोगले निर्णय लिन्छ कि कसको पालो आज हो। हो वा NO को द्रुत उत्तर जब हामीलाई यसको आवश्यकता छ र केहि पनि सोच्न बिना। के तिमी उसलाई चिन्छौ? यो हामीलाई वास्तवमै एक जिज्ञासु अनुप्रयोग जस्तो लाग्छ जुन तपाईंको दर्शकहरूले अवश्य पाउनेछन्।
यो केवल अर्को अनुप्रयोग मात्र होईन। IFTTT तपाईंको मनपर्ने अनुप्रयोगहरूको संग्रह हो। तपाइँ केवल एक मा तपाइँको अनुप्रयोग को सबै भन्दा साधारण उपयोगिताहरु सरलीकृत गर्न को लागी सक्षम हुनेछ। तपाइँ आफ्नो रुचि भन्दा बढि चार सय भन्दा बढि अनुप्रयोगहरुलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले प्रयोग गर्न चाहानुभएको अनुप्रयोगहरूको लागि एक स्विच।
बिभिन्न कन्फिगरेसनहरूको माध्यमबाट तपाईं आफ्नो अनुप्रयोगहरू र फोन सेटि programहरू प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंलाई सूचित गर्न वा केहि कार्यहरू गर्न। तपाईं, उदाहरण को लागी, गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँको घर वाइफाइ बिच्छेदन जब तपाइँ घर छोड्नुहुन्छ, र यसैले ब्याट्री बचत गर्नुहोस्। वा एउटा सूचना प्राप्त गर्नुहोस् कि भोलि तपाइँ काम छोड्दा यो एक मोटरसाइकल सवारी गर्नबाट जोगिन वर्षा हुन्छ।
तपाईं सक्नुहुन्छ तपाईको पत्नी वा आमालाई सन्देश सेट गर्नुहोस् जब तपाई ब्याट्री सकृय हुन लाग्नुभएको छ। IFTTT लगातार विकासमा छ र साप्ताहिक रूपमा नयाँ उपयोगिता र अनुप्रयोगहरू थप्दछ। तपाईले सामाजिक नेटवर्कमा चाहेको भन्दा बढि समय बर्बाद नगरी इच्छित उपयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यो एक विशेष फोल्डर मा तपाइँको स्क्रीनशट संग्रह हुनेछ। तपाईं आफ्नो फोटोहरू, फोन नम्बरहरू, तपाईले चाहानु भएको जगेडा प्रतिलिपिहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईको सब भन्दा साधारण साइटहरू र बिभिन्न सन्देश र सूचनाहरू कन्फिगर गर्नुहोस्। A) हो तपाइँको पार्टनरले तपाइँले when सुपर the मा हुँदा सन्देश प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र यदि तिमीलाई केहि चाहिएको छ भने तपाईलाई सूचित गर्नुहोस्। वा तपाईका साथीहरूलाई थाहा दिनुहोस् जब तपाई फोनको स्पर्श नगरी सामान्य बैठक पट्टीमा हुनुहुन्छ। यसको प्रयोगहरू तपाईंले कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ।
जे होस् IFTTT ले हामीलाई धेरै सुविधाहरू प्रदान गर्दछ, यो अगाडि जानको लागि डिजाइन गरिएको हो। यदि तपाईको घर डोमटाईज्ड छ भने तपाईलाई पूर्ण नियन्त्रणको चाहिन्छ। तपाईंको सबै जडित उपकरणहरू, बत्तीहरू, अन्धा, सुरक्षा अलार्म कन्फिगर गर्नुहोस्। तपाइँको स्मार्टफोनको साथ तपाइँको औंलाको छेउमा सबै कुरा हुन सक्छ।
तपाईंले आज खोज्नु भएको अनुप्रयोग पाउनुभयो?
हामी आशा गर्दछौं कि यदि होईन भने, तिनीहरू मध्ये कम्तिमा पनि एकले तपाईंको ध्यान खिच्छ र तपाईं यसलाई परीक्षणको लागि डाउनलोड गर्नुहोस्। गुगल अनुप्रयोग स्टोर मार्फत यस अभियानमा हामी तपाईंलाई यस्तै अधिक प्रस्ताव गर्न चाहँदैनौं। तपाईलाई केहि थाहा हुन सक्छ, तर हामी आशा गर्दछौं कि हामीले तपाईलाई केहि अज्ञात देखाइएको छ।
केहि एप्सले केवल हाँस्न बाहेक अरू केही गर्दैन। तर अन्य अनुप्रयोगहरूले तपाईंलाई तपाईंको स्मार्टफोनको लागि अधिक प्रयोग फेला पार्न मद्दत गर्न सक्दछ। हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ धेरै जिज्ञासु अनुप्रयोगहरू छन् जुन हामी फेला पार्न सक्छौं, त्यसैले हामी फर्कने खतरा दिन्छौं।
सामान्य जस्तो हामी तपाईंलाई आमन्त्रित गर्दछौं टिप्पणीहरूमा हामीलाई भन्नुहोस् कि तपाईंले अनुप्रयोगहरूको यो छनोट फेला पार्नुभयो। र सबै माथि हामीलाई मनपर्ने वा जिज्ञासु अनुप्रयोगको सल्लाह दिन जुन यस चयनमा ठाउँ लिन सक्दछ आजबाट आज तपाईले खोजिरहनु भएको कुरा फेला पार्न सक्नुहुन्न, तर हामी तपाईको स्मार्टफोनमा चाहिएको त्यो अनुप्रयोगको खोजी जारी राख्नेछौं ताकि यो पूर्ण भयो।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » एन्ड्रोइड को लागी सब भन्दा उत्सुक अनुप्रयोगहरु
नविकरण गैलेक्सी नोट of को पहिलो फोटोहरु देखा पर्दछ